Ciidamada Dowladda oo howlgallo amni ka sameeyay deegaanno hoostaga Degmada Afgooye (Sawirro). | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Ciidamada Dowladda oo howlgallo amni ka sameeyay deegaanno hoostaga Degmada Afgooye (Sawirro).
Ciidamada Dowladda oo howlgallo amni ka sameeyay deegaanno hoostaga Degmada Afgooye (Sawirro).
Ciidamada xoogga dalka ayaa maanta howlgallo amni xaqiijin ah ka fuliyay deegaanno hoostaga degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasi oo ka mid ah deegaanno ay ciidamada dhawaan ka xoreeyeen dhagar qabayaasha Al-Shabaab.
Ciidamada ayaa bulshada ku nool deegaannada ay howlgalka ka sameeyeen u qeybiyay raashin iyo daawooyin, maAdaama bulshadaasi ay ahaayeen kuwo nugul, isla markaana aan heysan waxyaabaha aas aasiga u ah nolosha beni’aadamka si ay u dareemaan naxariista dowladnimada